MUSUQMAASUQUMA DHAQANKEENI AYUU KA MID NOQDAY ?
Monday March 11, 2019 - 16:59:22 in Maqaallo by Wariye Tiriko
MUSUQMAASUQUMA DHAQANKEENI AYUU KA MID NOQDAY ? MUSUQMAASUQU MA DHAQANKEENII AYUU KA MID NOQDAY ?
Jawaabtu way noo wada caddahay : oo haddaynu dib u jaleecno somaliyada koonfureed , waxa ka jiray weligeedba musuqmaasuq - laaluush - akhlaaq xumo fara badan oo ay weliba ku soo barbaareen ,oo gumaystihii talyaaniga ay ka dhaxleen .
Sidaa awgeed musuqmaasuqu - laaluushku- dhacu - boobku iyo tuugadu ba , waxay u noqotay dhaqan , waanay sharciyaysteen .
Waxaanay noqdeen dhaqan lawada ogol yahay , oo raalli laga wada yahay , sida baayac mushtariga oo kale - ganacsiga - beeraha .